DRETFP DIANA : Fijerena ifotony ny zava-misy any an-toerana ny Minisitra – METFP
Nijery ifotony ny maharary ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa Ramatoa Minisitra VAVITSARA Rahantanirina Gabriella. Nitsidika sy nitafa tamin’ireo mpitantana sy mpampiofana amin’ny ivon-toeram-panofanana na miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana tao Anivorano, Ambilobe, Ambanja ny tenany, niaraka tamin’ny Talem-paritra ETFP faritra Diana.
Ny fitaovana hoenti-mampihatra ny fiofanana noratovina no tena hita taratra fa manahirana ny maro amin’izy ireo. « Na dia te hanaraka ny fenitra aza izahay dia lafo vidy ny fitaovana, raha hampiakatra ny saram-pianarana indray anefa dia hiala an-daharana ireo mpiofana » hoy ny solontenan’ireo mpitantana ivon-toeram-panofanana tsy miankina iray.
Misedra izany olana izany ihany koa ireo ivon-toeram-panofanana miankina amin’ny Fanjakana eo amin’ny lafiny fahanteran’ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana. Nahita izany Ramatoa Minisitra dia niresaka mivantana tamin’ireo mpitondra Fanjakana ifotony, ary nitafa sy nidinika amin’izay fomba rehetra hahitam-bahaolana.
Ny fanatsarana ny ivon-toeram-panofanana, na ny tao-trano izany na ny fampitaovana, toy izany koa ny « Curricula » izay mandrafitra ny fanofanana no vaindohan-draharahako, afahan’ny tanora misitraka asa mendrika sy mahavelona.
Anisan’ny hetahetan’ireo rehetra notsidihina ihany koa ny fanohizana fanofanana fohy ezaka izay mamaly ny filan’ny faritra ary ny fanatsarana sy fampitomboana ny fahaiza-manaon’ ireo mpampiofana.
Hijery ireo fiaraha miasa amin’ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombon’antoka, ankoatran’ny fitondrana izany eny anivon’ny Governemanta.
©️SCOM METFP/Septembre 2021